Venezoela: Misy Loza Mananontanona an’i Mata Redonda Ve? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Septambra 2012 11:07 GMT
Vakio amin'ny teny Aymara, English, Dansk, Español
Mampiasa fampahalalam-baovao an-tserasera ny mponina mpifanolobodi-rindrina ao Mata Redonda, tanànan'i Venezuela ao Maracay, mba hampahafantarana ny loza mety hitranga raha toa ka mirodana ny rindrina manasaraka ny faritra ao amin'ny Renirano Valencia.
Nanomboka ny adihevitra taorian'ny fandefasana lahatsary tao amin'ny YouTube sy ny fanaparitahana izany tamin'ny Twitter sy Facebook. Nitondra nankany amin'ny olana momba ny fahalotoan'ny renirano Valencia [es] sy ny tsy fisian'ny asa fanadiovana ihany koa izany.
Tao anatin'izay andro vitsy izay, lahatsary marobe no navoaka izay manasongadina ny mety hisian'ny fahasimban'ny tontolo iainana. Niadian-kevitra tao amin'ny fampahalalam-baovao an'olo-tsotra ihany koa ny vahaolana sy ny fepetra tokony hampiharina. Maro ireo fianakaviana no miahiahy ny tsy hahitany trano hialofana raha toa ka tonga tampoka ny tondra-drano, ny hafa kosa nampandre sy nandefa fampitandremana rehefa hita fa tsy nisy nihaino izy ireo.
Namoaka ilay lahatsary nozarain'ny mpiserasera i Ruckyto, mpisera Twitter:
Romualdo Hostos kosa nanatontosa horonantsary mikasika ny voka-dratsin'ny orana tao amin'ny faritra, herinandro lasa izay:
Hoy i Hostos naneho hevitra:
Ny alin'ny 14 Aogositra, taorian'ny oram-be mivatravatra tao Maracay Edo Aragua, fanorenan-tanànan'i Mata Redonda, tondraky ny reniranon'i Madre Vieja Lindero bloc 29 ny trano manodidina, ka mahatonga ny fiarahamonina mitebiteby eo am-piandrasana ny minisiteran'ny tontolo iainana hanatanteraka ny didim-pitsarana navoakan'ny TSJ [Fitsarana Tampony].
Mitohy ny fitarainana ao amin'ny Twitter, maro ireo manontany raha ao anatin'ny loza vaovao i Venezoelà tahaka ny nitranga tao Amuay. Sonia Guanipa (@soniaguanipar) [es] nilaza hoe:
@soniaguanipar: ¿Otra tragedia +?…Muro de contención de #MataRedonda #MARACAY: http://youtu.be/tA-u-6SG-xU
@soniaguanipar [es]: Loza vaovao hafa?… Rindrim-panohanana ao #MataRedonda #MARACAY: http://youtu.be/tA-u-6SG-xU
Tafiditra anatin'ny adihevitra ihany koa ny fifaninanana goavana amin'ny fifidianana amin'ny volana Oktobra izao. Maro ireo nahatsikaritra ny tsy fandraisan'andraikitr'ireo andrim-panjakana izay zava-dratsy amin'ny fampielezan-kevitry ny filoha Hugo Chávez. Ny hafa kosa nanipika ny amin'ny andraikitry ny fiarahamonina sy ny vahaolana efa natolotra, izay nolazain'ireo fa tsy misy vokany eo noho eo.
Bilaogy Todos unidos por Venezuela [es] (Miray ho an'i Venezoela ny rehetra) naneho hevitra hoe:
Tandremo, mampiseho ny loza hoavy manaraka ity lahatsary notontosaina androany ity. Efa hirodana ny rindrina mihazona an'i Mata Redonda, efa tafakatra maherin'ny 2 metatra ny rano ao amin'ny arabe. Raha vao mirodana ny rindrina, ho tondraky ny rano avokoa manerana ny faritra ary tsy misy olona mahafantatra ny haben'ny fahasimbana mety hisy. Hiseho avy eo i Chavez hanome tsiny ny loza “fahaefatra” ary hilaza fa tsy olany izany. Tokony hitohy ny hetsika!